Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » EU » Owesifazane wokuqala eminyakeni engama-20 uqambe igama likaMongameli omusha wePhalamende le-EU
UMetsola uthe "sekuyisikhathi sokuthi iPhalamende LaseYurophu liholwe ngowesifazane," ngakho i-EU ingathumela umyalezo omuhle "kuyo yonke intombazanyana" ezwenikazi lonke.
Roberta Metsola, obesebenza njengelungu le IPhalamende laseYurophu eMalta kusukela ngo-2013, uqokwe njengoMongameli omusha wePhalamende le-EU, olandela usopolitiki wase-Italy uDavid Sassoli, owashona ngoJanuwari 11, 2022.
Ngaphambi kwalokho, uMetsola, 42, uke waba yiphini likamengameli lokuqala IPhalamende laseYurophu ngesikhathi sikaSassoli.
Kuvidiyo efakwe kuTwitter ngaphambi kokhetho lwakhe, uMetsola uthe “sekuyisikhathi sokuthi a IPhalamende laseYurophu iholwa ngowesifazane,” kanjalo EU ingathumela umyalezo omuhle “kuyo yonke intombazanyana eyodwa” ezwenikazi lonke.
Esithembisweni sakhe kumalungu ephalamende, uMetsola uthe ufuna "ukuphinda athathe lowo muzwa wethemba nomdlandla" kuphrojekthi yaseYurophu, efuna ukuxhumana nezakhamizi ngale "kwebhamuza" laseBrussels naseStrasbourg.
Lapho esengumfundi, uMetsola wakhankasela ukuthi iMalta ijoyine EU, eyakwenza ngo-2004, yaba izwe eliyilungu elincane kunawo wonke kule bloc elinabantu abangaphezudlwana kuka-500,000.
Ngaphambi kokhetho lukaMetsola, i EU IPhalamende libe nomongameli besifazane ababili kuphela, bobabili abavela eFrance, kusukela laba umhlangano owakhethwa ngokuqondile: uSimone Veil kusukela ngo-1979 kuya ku-1982 kanye noNicole Fontaine kusukela ngo-1999 kuya ku-2002.
Ngaphambi komnqamulajuqu wokuqokwa kwamagama ngo-5pm ngesikhathi sasekhaya (4:00 GMT) ngoMsombuluko, abantu abane, okuhlanganisa noMetsola, babeke amagama abo phambili. Uhlule u-Alice Bah Kuhnke waseSweden, uKosma Zlotowski wasePoland, noSira Rego waseSpain.
Ukhetho lwaqalwa ukudlula emhlabeni kukaSassoli ngoJanuwari 11, 2022, ngemuva kokungeniswa esibhedlela enecala elinzima lenyumoniya elabangelwa yi-legionella futhi “waba nenkinga enkulu ngenxa yokungasebenzi kwamasosha omzimba.”
Brussels IPhalamende laseYurophu Malta iPhalamende Twitter
I-Casino eyisakhiwo sodumo yase-Rome dell'Aurora ingena endaweni yendali
Abafana Ababi Noma Amagwala? INingizimu Afrika, Tanzania, Senegal...
Isikhalazo esisemthethweni sikaHulumeni wase-Ukraine kubo bonke i-UNWTO...
Ukwelashwa Okusha Kwehlisa Ukulunywa kanye Nezifo Ezingalapheki...
Abantu kanye neSalmon bandiza I-Qatar Airways - futhi ...
I-Medicated Shampoo Market 2022 Outlook, Yamanje kanye...
I-Endometriosis manje ibhekwa njengesifo sesistimu
Indawo Entsha Enkulu Yamagundane Nendawo Yomshado ePhuket, eThailand
I-Ukraine ijoyina umkhankaso omusha we-scream.travel owenziwe...
Ukwelashwa Okusha Kwabantu Abadala abane-Active Psoriatic...